Shina SUS304 Standard 10 loha milina mpanamboatra milina sy mpanamboatra | Lanja mahay
Ny lohan'ny loha marobe milanja 10 loha no safidy mahomby amin'ny kitapo, vatomamy, katsaka, tsaramaso, sakafo mangatsiaka, vary sy ny sisa.
Fitaovana fanorenana: SUS304
Machine Frame: 4 fototra
Fomba fizarana sakafo: Takelaka lemaka / takelaka fanaovana embossing
Toeram-piasana Cone Top: hovitrovitra
Kilasin'ny rano: IP65
Rafitra fanaraha-maso: Ny fanaraha-maso modular
Minimum Order Quantity: 1 napetraka
Kitapo 65 / min
Efijery mikasika 7 "na 10"
220V 50 / 60HZ, dingana tokana
Motera stepper (mitondra fiara modular)
Mizana 10 maro loha no maodely mahazatra sy ekonomika. Safidy tsara ho an'ny orinasa vaovao izany.
• Manana karazana 1,024 karazana fitambaran'ny lanjany.
• Ny takelaka famolavolana vovoka mahazatra dia haingam-pandeha amin'ny kitapo, vatomamy ary vokatra hafa ..
• Hopper 1.6L na 2.5L ho an'ny lanjan'ny vokatra sy ny habetsany.
• Takelaka Palin na takelaka embossing ho an'ny vokatra manana endri-javatra samihafa.
Smart Weigh dia manome fomba fijery 3D tokana (ny fijery faha-4 toy ny eto ambany)
Masinina misy milina fonosana
Ny milina famenon-doha mitsivalana 14 loha dia afaka manamboatra kitapo ondana na kitapo gusset. Ny kitapo dia vita amin'ny horonan-tsarimihetsika roll.
Ny mpandanja loha 14 dia miasa amin'ny milina fanangonana rotary. Izy io dia mety amin'ny fomba kitapo mialoha, toy ny doypack.
Ny mpandanja loha 14 dia miasa miaraka amin'ny denester lovia. Izy io dia mety hahatratra ny famahanana fiara tsy misy poizina, ny lanjan'ny fiara ary ny famenoana ao anaty fitoeram-pako, ny fandefasana auto ho an'ny fitaovana manaraka.
Masinina fanangonana thermoforming / tray
Miasa 14 ny mpandanja loha miaraka amina milina famonosana sarimihetsika
Previous: SUS304 mifangaro 24 loha milanja ambony loha
Manaraka: 1 Head Linear Weigher SW-LW1
Ny rafi-pitantanana modular dia midika hoe rafitra control. Mother board dia manisa toy ny ati-doha, mitondra ny takelaka fanaraha-maso ny milina miasa. Smart Weigh multihead weigher dia mampiasa rafitra fanaraha-maso modular faha-3.
Ny fifehezana 1 mitondra fiara dia mifehy 1 famonosana fahana ary hopper 1 lanja. Raha misy 1 tapaka hopper, dia mandrara izany hipopotama fanakonana izany. Hopper hafa dia mety miasa toy ny mahazatra.Ary ny takelaka familiana dia mahazatra amin'ny mpandanja andian-dahatsoratra maro loha. Ohatra: tsia.
Ny takelaka fiara 2 dia azo ampiasaina amin'ny tsia. Sambo fiara 5. Izy io dia mety amin'ny tahiry sy fihazonana.
10 ny lohany
Mini marina mahitsy 14 loha multihead weigher fo ...
SUS304 hafainganam-pandeha haingam-pandeha 14 loha